Antsafa · Global Voices teny Malagasy
Pejy 2 amin_ny 13
Tantara mikasika ny Antsafa
Mediam-bahoaka25 Febroary 2020
Antsafa niarahana tamin'i Héctor Josué Martínez Flores, mpikatroka nomerika avy amin'ny fiteny Nawat
Mediam-bahoaka18 Febroary 2020
This profile post is about Héctor Josué Martínez Flores, the host of the @ActLenguas Twitter account for February 10-16, 2020, and about his work with the Nawat language.
Fantaro i Jerome Herrera, hampiatrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 10-16 Desambra 2019
Mediam-bahoaka10 Desambra 2019
Vakio ny fanontaniana sy valiny ifanaovana amin'i Jerome Herrera, hampiatrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny herinandron'ny 10-16 Desambra 2019. Hozarainy amintsika ny asany amin'ny fiteny Chabacano
Mediam-bahoaka02 Desambra 2019
Iza moa i Abduweli Ayup, mampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny 26 nov – 2 Des 2019
Mediam-bahoaka26 Novambra 2019
Vakio ity fanontaniana sy valiny nifanaovana tamin'i Abduweli Ayup, mampiantano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny herinandron'ny 26 novambra - 2 Desambra 2019 ity. Hozarainy amintsika ny ezaka ataony hikolokoloana ny fiteny Uyghur.
Mediam-bahoaka11 Novambra 2019
Vakio ity fanontaniana sy valiny niarahana tamin'i Mulihay Talus, mpampiatrano ny kaonty twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny herinadro 12 - 18 Nov 2019. Hozarainy amintsika ireo ezaka ataony amin'ny fiarovana sy fametrahana ho amin'ny endrika dizitaly ny fiteny Minangkabau.
Fantaro i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien), hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 5 ka hatramin'ny 11 Novambra 2019
Mediam-bahoaka07 Novambra 2019
Vakio ny resadresaka nifanaovana tamin'i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien), ilay hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny 5 ka hatramin'ny 11 Novambra 2019. Hiresaka momba ny fiteny Pinuyumayan izy.
Mediam-bahoaka31 Oktobra 2019
Fantaro i Abhinash Das, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 15 ka hatramin'ny 21 Oktobra 2019
Mediam-bahoaka15 Oktobra 2019
Vakio ny resadresaka nifanaovana tamin'i Abhinash Das ity, ilay hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 15 ka hatramin'ny 21 Oktobra 2019. Hizara momba ny ezaka ataony amin'ny fiarovana ny fiteny Karbi any an-toerana izy.